Home Onye na-ahụ n'anya FOOTBALL Joachim Lower Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a World Cup Manager Legendal nke aha kacha mara amara; "'Jogi". Ihe omuma anyị nke Joach nke a na-akpoghi ihe omuma ihe na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omuma ama site na nwata rue oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere eziokwu na o duuru ndị Germany ka ha merie 2014 FIFA World Cup na Brazil. Otú ọ dị, nanị mmadụ ole na ole maara Joachim Low Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Joachim Lower Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Ndụ mbido
A mụrụ Joachim Löw na Ụbọchị 3 nke February 1960, na Schönau im Schwarzwald, Germany. A mụrụ ya na nne ya, Hildegard Löw na papa nna ya nke na-amaghị ama mgbe ọ bụ nwata.
Joachim Löw tolitere na ụmụnne ya ndị nwoke atọ, tinyere Pita, Markus na Christopher Low. Ọ bụ ya bụ onye kasị okenye n'etiti ìgwè anọ, ụmụ nwoke niile. Ụmụ nwoke na-egwuri egwu football site na mgbe ha nwere ike ije ije na aja aja nke Schönau, obodo ebe izu efu na-agwụ mgbe enwere football na ụkwụ ụkwụ.
Akụkọ Joachim Low dị na nwata na-adọrọ mmasị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe a na - ahụkarị - Ọ bụ banyere akụkọ nwatakịrị nwoke nke nna ya nwụnahụrụ mgbe ọ dị obere, onye nwere nsogbu ma nwalee ndụ nwata na ọrụ MA emesị bụrụ onye a gọziri agọzi site n'ichepụta talent na-enweghị isi.
N'oge ahụ, ụlọ akwụkwọ Schönau nyere ya ohere iji obi ụtọ soro bọl asọmpi n'oge oge egwuregwu.
N'ụlọ akwụkwọ, football ghọrọ osisi ọlaedo maka Low, ebe ọ hụrụ ndo na nkasi obi site na eziokwu nke nsogbu nna ya na-efu. Low hụrụ onwe ya na-agụsị akwụkwọ site na akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-eji bọl football. Ọ ghọrọ onye na-eto eto football na SC Freiburg si 1978 ruo 1980. Obere na-egosipụta talent dị iche iche dị ka onye na-eto eto na-amụrụ amị, na site na afọ 18 enwetawo nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya. N'okpuru ebe a bụ foto nke ihe ọ na-ele anya n'oge ọ bụ n'ememme football.
N'ụzọ dị mwute, ọrụ Joachim Low dị ka ndị na-agba ọsọ na-anọgide ruo afọ anọ (1985 ka 1989). Ọ nwere ọkpụkpụ gbajiri agbaji mgbe ọ dị afọ 22 bụ nke kwụsịrị olileanya ya ime ya n'elu. N'ụzọ dị mwute, nke a mere ka ọ gbahapụ football. Ịmara na ọ pụghị ime ya na football pụtara ịmalite ndụ n'ogologo ọhụụ. Joachim Low kụziiri onwe ya ịghọ onye ọkà ihe ọmụma nke nwere echiche miri emi. Ọ malitere ọrụ ịzụ ihe n'oge 23 dị afọ, na-amụ egwuregwu ahụ ma na-apụ.
Taa, Low nke ndekọ nke 70 na-enweta mmeri na 103 eme ya onye njikwa na pasent kachasị elu (67.96%) na akụkọ ihe mere eme German. Ọ bụ aha ụlọ na onye a maara na ya na-elekọta ndị egwuregwu Germany dị ka ụlọ nke ya. Nke a bụ akụkọ nwata anyị banyere Joachim Low. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwukarị, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Joachim Lower Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
N'okpuru nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-eme egwuregwu football, enwere nwunye ma ọ bụ enyi nwanyị. Site n'oge ruo n'oge, ikike Joachim Low nwere ike ịchịkwa ya, karịsịa ụdị ndụ ọ na-ebi na pitch na-ewuli ya obi ụtọ.
Low dị na Daniela Loew, ha ejikọtawokwa ọnụ karịa ihe karịrị afọ 30. N'ụzọ dị mwute, ha enweghị ụmụ, ha ka na-azụkwa echiche nke ịzụlite nwatakịrị.
Akụkọ banyere Joachim na Daniela bụkwa ihe dị ụtọ. Di na nwunye ahụ kọrọ na 1978 mgbe ọ bụ 17 ma ọ bụ 15. Ọ bụ oge ọ bụ onye na-egwu bọl na club FM Freiburg. Ha enwe mmekọrịta siri ike nke e wuru na ọbụbụenyi ruo afọ asatọ tupu ị kpebie ịke eriri. N'okpuru ebe a bụ foto nke nwa okorobịa Joachim Low na ịhụnanya maka ndụ, Daniela.
Joachim Lower Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Ndụ Ezinụlọ
Joachim Low sitere n'aka otu ezinụlọ a ma ama na Germany. Ekelere Joachim Low bụ onye a kọwara dịka nwa nwoke mara mma nye ezinụlọ ya. A maara obodo Schönau, Germany nke ọma dị ka ebe onye nlekọta na-aga nke ọma, bụ Joachim si abịa. Ị ga-amata obodo ya Schönau mgbe ị na-ahụ akwụkwọ mpịakọta a dị elu (nke dị n'okpuru ebe a) na ihe osise nke onye nchịkwa egwuregwu nke ụwa na-eme ka ọnụ ụzọ ahụ dị. Ka ị na-abanye n'obodo mara mma nke Schönau, ị maara ozugbo na ezinụlọ Low na ezinụlọ gị nọ n'ebe ahụ.
Ụmụnne ya na nne ya ka bi n'obodo ha. Ezinụlọ na-enweghi mmekorita nke nna ha na nna ha na-ejikọta ọnụ "Dị ka pitch na brimstone". N'okpuru ebe a bụ foto nke ezinụlọ na ememe nke ụmụ amaala na-asọpụrụ onwe ya, bụ Joachim Low.
Joachim Lower Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Ezigbo Ndụ Onye
Joachim Low nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike: Joachim Low bụ ọganihu, nke mbụ, nke onwe ya na nke mmadụ.
Ajọ: Joachim Low draịva na-enweghị uche ma nwee ike ịgba ọsọ site na mmetụta uche. N'ikwu ya, o nwere ike iwe iwe mgbe a na-akwaga ya na mgbidi.
Ihe Joachim Low nwere mmasị: Enwe obi ụtọ na ndị enyi, na-enyere ndị ọzọ aka, na-alụ ọgụ maka ihe kpatara ya na inwe mkparịta ụka ọgụgụ isi na ndị egwuregwu ya.
Ihe Joachim Low achọghị: Ọ na-enweghị mmasị ná nkwa ndị na-emebi, na-enweghị onye na-enweghị Daniela nwunye ya mara mma, ọnọdụ ihere ma ọ bụ ndị na-agwụ ike na ndị na-ekwenyeghị na nkà ihe ọmụma ya banyere Ijikwa egwuregwu.
Na nchịkọta, Joachim dị oke aka na ike. Ọ bụ onye na-eche echiche miri emi na onye nwere ọgụgụ isi. Ha na-enwe ike ijikwa egwuregwu n'enweghị ajọ mbunobi ma nwee ike ịme ka ike dị ike na-agba gburugburu ọ bụla ọ na-eme.
Joachim Lower Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Ọkwọ ụgbọala
Joachim Low nwere nnukwu nsogbu na ịkwọ ụgbọala. A machibidoro ya ịkwọ ụgbọala ruo ọnwa isii iji gbochie ọtụtụ ihe. A na-ata ya ụta maka ịkwọ ụgbọala ngwa ngwa. Nke a na-agbapụkwa karịa ókèala Germany. Dịka ọmụmaatụ, onye nchịkwa Germany anaghị achụga na Brazil n'oge 2014 World Cup na Brazil. Dị ka akwụkwọ akụkọ Germany bụ Die Welt si kwuo, A na-ejidekarị Joachim ngwa ngwa na iji ekwentị mkpanaka ya na wiil.
Onye njikwa n'ozuzu Germany na enyi nke Low, Oliver Bierhoff Foto dị n'okpuru ebe a na-ekwu na ọ ga-eme "Soro ndị na-akwado anyị Mercedes-Benz soro hụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike inye ya ụgbọ ala na-agba ọsọ ọsọ".
Joachim Lower Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Uzo nke di n'onu ya
N'otu oge, e nwere nrọ na Germany na Joachim Low dị arọ nke ntutu isi bụ n'ezie wig, ma mgbe a gbara ya ajụjụ ọnụ na Die Welt, Loew gụrụ akụkọ ahụ dị ka "Nsị". Iji kpochapụ uche nke ndị nwere obi abụọ, o nyere ọbụna onye nta akụkọ ahụ ntutu isi ya.
Ọbụna otu agbụrụ facebook nke a raara nye ihe mkpuchi nke ojii nke Joachim Low, nke a kpọrọ "Lee egwu Joachim Loew dị egwu?" Ruo oge, Low egosibeghị otú o si ejide iji nọgide na-enwe ntutu isi ya zuru okè. LifeBogger nwere ike ịkọwa na ọ na-ehicha ma ọ bụ na-ehicha ya mgbe niile.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ anyị Joachim Low Child Story na nkọwa dị oke akụkọ banyere eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 30, 2019
Bọchị agbanwee: February 12, 2019
Louis van Gaal Childhood Story Plus Ihe omuma nke oma